Yakafanira Wiricheya Positioning - Kugara Kufambisa
Chii chinoitika kana a wiricheya haina kukwana iwe? Kana iwe uri mune wiricheya izvo hazvina kukodzera iwe zvakanaka, pamwe iwe unotoziva kare mhinduro kumubvunzo iwoyo.
Zviri kusagadzikana uye kusagadzikana chiitiko. Kupesana nekutenda kwakakurumbira, mavhiripu haisi saizi imwe inokwana mhando dzese dzechigadzirwa. Kwechokwadi, kugadzikana wiricheya ruzivo, a wiricheya nekukodzera kwakakodzera kunodiwa.
mavhiripu huuya mumhando dzose uye hukuru asi hazvireve kuti iwe unogona kungotora chero saizi yaunofunga kuti iri padyo nekuitenga.
Kuyera & Yakareba Nguva Mhedzisiro
Inokurudzirwa kwazvo kuwana wiricheya kukwana kana kuti kuyerwa kuti ive inonyaradza nyaradzo, kunyanya kana a wiricheya ndiyo sosi yako huru ye kufamba. Iwe haudi kungowana akaomarara fungidziro pane chimwe chinhu chaunotsamira pazviri.
Mhedzisiro yehurefu hwakareba mamiriro mune a wiricheya zvinogona kutungamira kumatambudziko akasiyanasiyana anosanganisira kugara uchiita basa, kutendeka kweganda, nyaya dzekufema, uye kunyangwe kugaya kunetsekana.
Chiyero chakakosha kwazvo chinofanirwa kutariswa kana chakakodzera a wiricheya zvinosanganisira: hupamhi hwehupamhi, hukadzi, hwepamusoro uye hwezasi gumbo kureba, trunk kukwirira, garo uye kugokora kukwirira, chipfuva upamhi, chifuva kudzika uye zvakanyanya kukosha, ruoko rwemberi.
Pane zvakawanda zvimwe zvinhu zvinofanirwa kutorwa mukufungwa kunyanya kana chiri chinhu chaunofarira pane chimwe.
Izvo zviyero zvezviyero zvaunoda zvinogona kupihwa kumutengesi kana mugadziri panguva yekutenga kwako. Aya matanho anogona kushandurwa kuita zviyero zvemidziyo kuitira kuti vakwanise kukubatsira kusarudza iyo wiricheya zvinonyatsokodzera zvaunoda.
Iwo akasiyana mazinga ekugadzirisa zvigaro anogona kutamba musiyano wakakura kana zvasvika padanho rako rerunyararo. Chigaro upamhi uye chigaro kudzika chega kunogona nyore kuona kuti yako wiricheya kufamba chiitiko chichava senge.
Gumbo & tsoka
Gumbo zororo kugadzirisa ndechimwe chinhu chakakosha maererano nerunyararo. Ita shuwa kuti usasvetuke kubva pachinhu ichi. Kureba kwegumbo kunozorora hakufanirwe kunge kwakaiswa pakukwirira kwakasiyana zvakanyanya kubva pamutsiro wepasi sezvo iwe uchida kuti tsoka rinyatso gadzikwa pachigaro chetsoka.
Chero kutsika kwetsoka kana chakasarudzika mamiriro chinofanirwa kutorwa mukufungwa sezvo izvi zvakakosha zvinhu zvekucherechedza. Kana gumbo rekuzorora kureba rakapfupika, iwe unonzwa kuwedzera kwekumanikidza pamapfupa ako akagara izvo zviri pachena kuti zvingave zvisina kugadzikana.
Kana yakarebesa, inokonzera kuwedzera kwekumanikidza pazvidya.